Xanthos' Poems: November 2011
ပါလက်စတိုင်း ကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်း
ဒီကမ္ဘာကြီးက ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမဟုတ်ဘူးလား မေမေ
မေမေနင်းထားတဲ့မြေသားက ကမ္ဘာလား မိုင်းလား
ကျည်ဆန်က ကျွန်တော်သွားရမယ့် မြေပုံအညွှန်းလား။
Thanks bro, for sharingagood poem to us.
စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကိစ္စပေါ်မှာမှ မမှီပါနဲ့။ ကိုယ်မှီထားတဲ့အရာက လှုပ်ရင် ကိုယ်ပါလှုပ်နေမယ်။
ဘယ်နားမှာ မှောက်ရက်လဲနေခဲ့သလဲ။ ။
ခုန်ချလိုက်တယ် ......နေပြန်ကောင်းမယ့်လောကကြီးဆီ၊ ဆိုပါတော့ ရောက်သွားရော ပိုဆိုးတဲ့လောကကြီး။
သတ်သေခြင်းကို သက်သေလိုက်ရန်မလို၊ သေပြီးသားလူအတွက် အမနာပ စကားတင်းမလို၊
မသိခဲ့ခြင်းများအတွက် မည်သူမျှ -င်ယားနေရန်မလို။
သွေးတွေလန့်ပျံသွားတော့ .... ၀ိညာဉ်တစ်ဝက်စွန်းကွက် ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲထိုးထွက်
အကြည့်မျိုးလဲ။ ဘယ်လိုအငြိမျိုးလဲ။ ဘယ်လို သံယောဇဉ်လဲ။ ဘယ်လိုတက်တူးလဲ။ ဘယ်လိုအိမ်မက်ကို ဘယ်လို ဂဟေတို့ထားခဲ့လဲ။ ဘယ်လို
ဘယ်လို မာခြင်းအဆင့်လဲ။ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းဟာ မေတ္တာတရားကို အစားထိုးမှာလဲ။ မဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေ နှစ်ယောက်ကြားမှာ မြင့်မားတံတိုင်းတွေ၊ အဖြစ်မှန်ကို လက်မခံနိုင်ရင်တော့ (အဖြစ်မှန်ရှိတဲ့လောကထဲက)ထွက်မှပဲဖြစ်မယ်မဟုတ်လား။(zephyr)
တစ်ခါက ဓားဦးချွန်ကို ဆုပ်ကိုင်၊ ရင်ဘတ်ထဲထိုးသွင်းပစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ် ......... အဲဒီနေ့တွေက နီးနီးလေး ........အဲဒီနေ့တွေက နီးနီးလေး .......... ရင်ဘတ်နဲ့ဓားနဲ့ဟာ နီးနီးလေး၊ အလျားခြောက်လက်မ၊ လေ၀င်မျှော့ကြောင်းဟာ သေခြင်းတရားနဲ့နီးနီးလေး၊ မျက်ရည်အက်စက်တွေဟာ သေခြင်းတရားနဲ့နီးနီးလေး၊ ချစ်ခြင်းရဲ့ side effects တွေဟာ သေခြင်းတရားနဲ့ နီးနီးလေး။ အကြီးကြီး အသည်းကွဲနေတော့ အကြီးကြီး ကြံစည်နေမိတယ်။ စိတ်ကျခြင်းဟာ အကြီးကြီး ......။ နှလုံးသားပေါ်က ကန့်လန့်ဖြတ် အမာရွတ်ဟာလည်းအကြီးကြီး။(xanthos)
ချစ်ခြင်းတရားနဲ့လမ်းဖြတ်ကူးမိတဲ့ ကံဆိုးမလေး .... အဝေးပြေးလမ်းပေါ် ... အလျားလိုက် ကူးနေတုန်းလား။ စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတွေထက်ပိုတယ်။ ဒီဘ၀တစ်ရွက်ကို သံသရာစာအုပ်ထဲကဆွဲစုတ်လိုက်တော့ ဘာထူးသွားလဲ။ ဘာ .......ထူး ..........သွား ...............သေး .......................လဲ။(zephyr)
မမြင်ရတဲ့နံရံတွေ Stupid Girls သီချင်းတွေကျန်နေသူတွေဆိုနေလည်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မျှားစရာ စိတ်မျှားချိတ်လည်းမရှိဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သစရာ နောင်တတရား ကော်ပတ်လည်း
Escape Artist ရဲ့ပြကွက်။ (xanthos)
နာကျင်မှု ဟာ နာကျင်မှုအတိုင်းမထားနိုင်လျှင်
အချစ်ဟာ အရိပ်ထဲက ခွေးလို
ရသစာပေတွေ ချဲ့လွန်းတော့ အကြီးကြီး ပြူးတူးပြဲတဲ၊
၂၀၀၉ ည နှစ်နာရီများ၊
puzzle games လေးဆော့နေ၊
ဥပါယဿ ပစ္စယာ suicide
ငြိမ်းချမ်းမှုသည် ငါ့ထံသို့ ပြန်ရောက်မလာခဲ့။
(Thanks Z for helping me out to collect our old poems.)
The poem I read, part 3, Muchness
form the window of the hotel room,
likeasteel wool bouquet
That's how my heart is, I thought-
with all of its in muchness.
But as I was dreamming, your boat pulled away.
of the harbor left behind, like unpolished stell
with its suggestions of journey and destination.
The Poem I read, part 2
There are also men in the world. Sometimes we forget, and think there are only women - endless hills and plains of unresisting women. We make little jokes and comfort each other and our lives pass quickly. But every now and then, it is true,aman rises unexpectedly in our midst likeapine tree, and looks savagely at us, and sends us hobbling away in great floods to hide in the caves and gullies until he is gone.
(from 32 Poems)
The Poem I read
Talking quietly when they can't sleep
စာရေးရင်း အေးအေးလူလူ နေမှာပေါ့တဲ့။
ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီလို့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ ပင်လယ်ရေ
ဆင်နောက်လိုက်တဲ့ ခွေးအတွေမှာလည်း သက်သက်သာသာ၊ ဇိမ်တကျကျပဲ၊
ဆင်ဖြူတော်ရှိရင် ကြံစုပ်လို့လည်းရတယ်၊ ဆားငန်သီးထုတ်လို့လည်းရတယ်။
လူနှစ်သောင်းဟာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ တစ်ရာလောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်၊ သတင်းတွေကလည်း ဆတိုး/ ဖွတိုး တိုးပွားလာတယ်။
အတုတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ချင်ရင်တော့ ပြဿနာအစစ်ရှိတယ်။
ရဟန်းတွေ တရားဟောရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချည်းလို့လည်းမထင်နဲ့တော့။
လမ်းတွေဟာ လူတွေကို သယ်ဆောင်မထားတော့ဘူး။
လူတွေဟာ မြင့်တက်လာတဲ့လမ်းမှာ ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး၊
အဲဒီရဟတ်ကို သုံးနှစ်တစ်ခါပတ်စီးနေရင်း မူးလာ၊
အော့အန်လိုက်တဲ့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ၊ တစ်ဆို့နေတဲ့ စကားလုံးများ၊
ဖျားနာခြင်းသည် သင့်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်၊
ငါ့ဝီစကီ ဘယ်သူမော့သွားသလဲ ပါ။
//Safe trip Mr.Yellow. Welcome back.....!!
//Still got some whisky bottles for us ....
Labels: junk poems
... ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ဖဲ့ဖဲ့ချနေတဲ့ သူတွေ များလွန်းတဲ့ကမ္ဘာ။ အဆင်မပြေရင် ပိတ်လိုက်။ အဆင်ပြေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ အဲဒီမေးခွန်းဟာ အခုခေတ်မှာမရှိတော့ဘူး။ အဆင်ပြေရင် အဆင်မပြေတာတစ်ခုခုတွေးနေလိုက်။ ။့။(xanthos)
i sTrOnGlY bElIEvE ThIS PoEM Is NoT A pOEm. (1)
junk poems (1)
soul-to-soul talk (1)
ခုန်ချလိုက်တယ် ......နေပြန်ကောင်းမယ့်လောကကြီးဆီ၊ ဆ...